Fiarovana ny zava-boahary sy ny ala: Tsy ny politikan'ny ONG any ivelany kosa no aoka ampiharina eto e
mardi, 01 octobre 2019 14:20
Miala tsiny aminao manokana aho andriamatoa minisitry ny tontolo iainana, ekena ary tokony hiaro ny zava-boahary isika, ao anatin'izany ny olombelona, ny biby, ny zava-manan'aina sy ny ala, ny voninkazo ary zava-maniry maro samihafa, na an-tanety na an-dranomasina na an-dranomamy, eny an'abakabaka.
Madagasikara maitso no tanjona.
Efa nisavoritaka ny olona, ary hatramin'izao tamin'ilay noty navoakan'ny minisitera hoe tsy misy mahazo manapaka hazo intsony, ka na ireo mpanao planche sy saribao aza dia nifampitadiavana, taty aoriana, noferana indray hoe, ny palissandre, bois de rose ary bois d'eben indray sisa no tsy azo kasihina. Ny vahaolana aroso anoloana ny saribao anefa tsy matotra.
Somary taitra aho nahita anao faly ery nanondro ireo palissandre, hoe akarina Antananarivo anamboarana ny Rova, mody nampianao kely moa hoe, ho fandraisana anjaran'ny Menabe.
Tsy misy maharatsy izany, na Rovan'ny Merina aza io, dia efa eken'ny rehetra fa vakoka iraisam-pirenena, ka dia ilaina tokoa ny fanamboarana sy fanatsarana azy.
Fa ny indro kelin'ny mpandrafitra, dia ny faritra nialan'ireo hazo tsara ireo moa izany na ny Tranobe, izay Rova ihany koa izy io aty an-toerana, dia ala sapin sy kininina ihany izany no azo anamboarana azy?
Nahoana moa no sakanana, araky ny tian'ny CITES sy ireo ONG milaza fa anome fiaramanidina mihitsy ny Firenena Malagasy hiarovana ireo ala, fa isika ve tsy masimandidy amin'ny harenantsika, isika anga no faran'ny dondrona ka tsy ahay hoe iza no hazo tapahina, iza no kajiana, iza no ambolena ho an'ny taranaka any aoriana.
Raha resaka couche d'ozone no resahina, ny ala sapin anie ka mora maniry, ary maro misandrahaka anemotra ala ka ho maitso tokoa i Madagasikara e, fa ny bois de rose, izay lafo vidy ka ahafantsika mampandroso aingana ny firenentsika, nahoana no tsy azo trandrahana, ny palissandre, izay hazo tsara, tsy mendrika anana fanaka sy varavarana mafy vita amin'ny palissandre ve isika, fa hanao parkex vita sinoa plastique?
Aoka ho fantatra fa ny bois de rose dia tsy alabe mikitroka akory, fa hazo mitokatokana zara raha ahitana betsaka amin'ny toerana iray, ka tsy ny fisian'ny bois de rose ao anaty ala velively akory no ampisy na hiaro ny couche d'ozone. Izy ela vao maniry angaha, raha ny hoe tsy misy manana azy firy ny firenen-kafa, fa rehefa hay ny manapaka ny bois de rose, dia tsy mihoatra ny 25 taona dia efa mahalebe hafa koa.
Mitovy tsy misy hafa amin'ny solika io amiko, rehefa alainao ao ambanin'ny tany ny solika, dia afaka 3 tapitrisa taona indray vao misy solika hafa, ity anefa 25 taona dia efa maniry.
Isika miteny izao manana stock bois de rose 40 000 tonnes, efa tapaka isika, izay mitentina 1 800 miliara ariary, efa eo an-tokotany io fa tsy any anaty ala, ka esory io eritreritra ny andoro bois de rose io, ady tsy vita eto raha mikasika an'io ianareo, manana tompony io fa tsy atao angovo fotsiny eo.
Tsy misy adala ka hilazana hoe avarina an-drano ireo bois de rose ireo, mba ampitsahatra ny fakana azy, efa film nandeha teto ny vanille mody nodorana tamin'ny andron'ny caisse vanille, mba tsy hilazako ireo rongony maro mody dorana nefa ny sera mitohy lalan-kafa indray.
Amidio io bois de rose io, mifanaraha amin'ny tompony, alaivo izay haba tandrify amin'izany, tsy mila mindram-bola akory dia vita ny sekoly manerena ny Nosy raha ampiasaina io 1 800 miliara ariary io.
Etats-Unis, Canada, manankarena amin'ny fitrandrahana ny ala, ny trano rehetra any dia 80% vita amin'ny hazo avokoa, fa tany maitso izy ireo, ary feno ala mikitroka, satria matihanina ny fitrandrahana.
Ka aza isika indray no mamono ny harenantsika, fa ampiroboroboy ny toe-karena amin'ny alalan'ny fitrandrahana voafehy sy matihanina, dia tsy hisy io ala mirehitra amin'ny hekitara maro io.